पारिवारिक तनाव समाधानका यी हुन् उपाय - Purbeli News
पारिवारिक तनाव समाधानका यी हुन् उपाय
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १२, २०७६ समय: १६:०१:०७
तनाव आजभोलि सामान्य जस्तै बनेको छ । अधिकांश मानिसमा केही न केही विषयको तनाव रहेको पाइन्छ । तर यसको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा मानिस डिप्रेसन लगायतका समस्यामा पर्न जान्छ । जुन भविष्यमा जटिल समस्या बन्ने मात्र होइन यसले व्यतिलाई सामान्य अवस्थाबाट असामान्य अवस्थामा नै पुर्‍याउँछ ।
त्यसैले तनावको विसर्जन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । तनावलाई सुरुवाती दिनमा नै समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि तनावको मूल कारण पत्ता लगाउन आवश्यक हुन्छ र त्यसको समाधानको उपायको खजी गर्न आवश्यक हुन्छ ।
तनाव एक यस्तो मानसिक समस्या हो जसबाट आजभोलि धेरै मानिस प्रभावित भइरहेका छन् । कार्यालयदेखि लिएर घरसम्म कुनै न कुनै तनाव मानिसहरुलाई हुने गरेको छ ।
अफिसमा भोग्नपरिरहेको तनाव सहज रुपमा कम गर्न सकिन्छ । तर पारिवारिक तनाव एक यस्तो समस्या हो जसको व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन । अफिसको तनाव कामको चाप वा अन्य कारणले उत्पन्न हुने हुँदा त्यसलाई केही सहज रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ । तर परिवारका कारण उत्पन्न भएको तनाव व्यक्तिलाई मानसिक रुपमा बिरामी बनाइदिन्छ ।
पारिवारिक तनावका कारण व्यक्ति समस्यामा परिरहेको हुन्छ । तर यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने ठूलो समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
के हो पारिवारिक तनाव ?
पारिवारिक तनाव उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण परिवारका सदस्यबीचको लडाई–झगडा र सम्बन्धमा आएको तिक्तता हो । जो सामान्यता विवाहपछि उत्पन्न हुने गरेको छ ।
नेपाली समाजमा संयुक्त परिवारको परिपाटी रहेको छ । जुन धेरै पक्षका लागि सकारात्मक विषय हो । तर कहिलेकाही पारिवारिक बेमेलका कारण समस्या उत्पन्न हुन्छन् र मानिसमा त्यसले नराम्रोसँग असर पारिरहेको हुन्छ ।
विवाहपछि व्यक्तिमाथि नयाँ नयाँ पारिवारिक उल्झनहरु आउन थाल्छन् । जसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने परिवार सही ढंगमा चल्छ भने व्यक्ति स्वयंलाई पनि तनावका कारण पर्ने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
विवाहपछि व्यक्तिलाई नयाँ जिम्मेवारीको दबाव आउँछ । हरेकलाई खुशी राख्ने दबाव हुन्छ । पति पत्नीबीचको सम्बन्ध, बालबालिकाको हेरचाह, आमाबुवाको हेरचाह, नयाँ सम्बन्धहरुलाई ठिक स्थानमा राख्नुपर्ने दबाव आदी समस्या उत्पन्न हुन जान्छ ।
जसले तपाईको दिमागमा दबाव सिर्जना गर्छ र विस्तारै डिप्रेसनमा जाने खतरा बृद्धि हुन्छ । त्यसैले पारिवारिक समस्याहरुबाट भाग्ने नभइ त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्न जरुरी छ ।
कसरी गर्ने कम ?
पारिवारिक तनाव भएको व्यक्ति तपाईं मात्र होइन । धेरैले यस्तो तनावको सामना गरिरहेका छन् । त्यसैले देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने तर्फ कदम अघि बढाउन जरुरी छ ।
पारिवारका सदस्यहरुसँग समस्याका बारेमा कुरा गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् । चुप लागेर वा रिसाएर समस्या समाधान हुँदैन बरु त्यसले तनावलाई अझ बढाउँदै लैजान्छ ।
जिम्मेवारीहरुलाई बोझको रुपमा लिने गर्नुभएको छ भने त्यसलाई सहज रुपमा लिने गर्नुहोस् । व्यक्तिले हरेक खालको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ र त्यसलाई त्यही रुपमा वा सहज रुपमा लिने गर्नुहोस् ।
कार्यालयमा तनाव भए तपाई कामबाट विदा हुने वा अर्को विकल्पको खोजी गर्न सक्नु हुन्छ तर परिवारको विकल्प अर्को हुन सक्दैन त्यसैले समाधानको विषयमा गम्भीर हुने गर्नुहोस् ।
पारिवारिक बेमेलको अवस्था आउनु अस्वभाविक होइन । कहिले आर्थिक कारणले त कहिले अन्य कारणले तनाव आउने गर्छ ।त्यसकारण तपाईले परिवारका सदस्यहरुसँग खुलस्त कुरा गर्ने गर्नुहोस् वा समस्याहरुबारे प्रस्ट पार्नुहोस् ।
संयुक्त परिवार वा पति पत्नी, बुवा आमा, दाजूभाइ, बुहारी, भाउजु लगायतका परिवारका सदस्यहरुबीच पारिवारिक बैठकहरुको आयोजना गर्दा पारिवारिक समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ ।
समस्याहरुका बारेमा उक्त छलफलमा स्पस्ट कुरा राख्ने र समाधानको विषयमा पनि छलफल गर्दा पारिवारिक रुपमा हुने तनाव कम हुन जान्छ । सासू बुहारी, दाजूभाइ, देउरानी जेठानीबीच बेमेल हुँदा सामान्यतया नेपाली समाजमा पारिवारिक समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् ।
त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो जिम्मेवारीबारे राम्रोसँग जानकारी गराउन सकिएको खण्डमा पनि पारिवारिक तनाव कम गर्न सहज हुन्छ ।
पत्नीले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका, दाइ वा भाइले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका, आमा बुवाले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका वा अन्य परिवारका सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका सही रुपमा निभएमा पारिवारिक तनाब उत्पन्न हुने अवस्था बन्दैन ।
त्यसका लागि सबैले आफ्नो आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिकालाई सही रुपमा निर्वाह गर्ने वातावरण परिवारमा बनाउन पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
परिवारले एक टीम जसरी काम गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने परिवारका सबैमा हाँसी खुसीको वातावरण बन्छ ।
परिवारमा आनन्ददायक वातावरण हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि बालबालिका लागि नियम अनुशासन र सीमाहरु हुन जरुरी छ भने आमाबुवा र अन्य सदस्यबीच पनि आत्मियता र खुल्लापन हुन जरुरी छ ।
कोहीकसैसँग डराउने वा नजिक नपर्ने अवस्था बन्नु हुँदैन । यसका लागि परिवारका सदस्यहरु बेलाबेलामा बाहिर घुम्न जाँने र सँगै समय विताउने काम गर्न जरुरी छ ।
व्यक्ति स्वयंलाई केही समस्या परेको खण्डमा परिवारका सदस्यहरुसँग ति समस्याहरुलाई राख्ने र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने कामम गर्न जरुरी छ ।
परिवारिक तनाव उत्पन्न भएको बेलामा कराएर होइन माया गरेर वा सम्झाएर समस्या समाधान गर्ने गर्नुपर्छ । केही गल्ती परिवारका सदस्यले गरिहालेको खण्डमा त्यसलाई ठूलो बनाउने भन्दा माफ गर्ने र गल्ती सुधार गर्ने मौका दिने तर्फ अघि बढ्न जरुरी छ ।